MILKII JIREENYAA–Yaada Dhuunfaa tokko tokko !! – Beekan Guluma Erena
MILKII JIREENYAA–Yaada Dhuunfaa tokko tokko !!	Beekan Guluma Erena
Education, Seenaa April 28, 2016CORA SEENAA KEESSAA
M I L K I I J I R E E NY A A
Akkamiin?!..Oromoo gosa kana lafa hinbuusiin!!!
1. Hiriyyummaan namoota wojjiin qabdu kaayyoo kee wojjiin hindeemu yoo ta’e xumura itti laatuu irraa duubatti hinjedhin. Gobbutti makamtee deemuu irraa ufqusadhu.
2. Milkaayina hawwita taanaan onnee waa uggitu qabaachutu sirraa eeggama.Waan cufa sodaattee harkaafi miila hidhattee jiraachuu nidandeetta. Milkaayinni garuu sodaatanii waan hunda irraa hidhamanii taa’uu bira hinjirtu.
3. Waan waadaa seentu irra waan hujiin mul’istu caalchisuuf yaali.
4. Kufaatii simudatuu maluuf namatti quba qabuu dhiisii itti gafatamummaa fudhu.
5. Kufaatii adeemsa keessatti siqunnamuu malutti hinqaanfatin. Kan osoo hinkufin bakka guddaa gaye ykn tabba baye hinjiru.
6. Namoota kaayyoofi dandeettii kee gaafii keessa galchan sirreessuuf hindhama’in. Adeemsa keessa wanti hundi ifa ni ta’aaf.
7. Namoota dandeettii kee shakkanitti seeqadhu.
8. Bakka woyiitti gargaarsaafi gorsa namootaa akka sibarbaachisu hubadhu ykn fudhadhu. Namni tokko waan cufa akka dansatti beekuun inuma hinyaadamne.
9. Woldorgommii kabaji ykn ulfeessi.
10. Kufaatii namootaa arguu irra injifannoo isaaniif hawwi.
11. Milkaayina argamsiisteef namoota irraa galata argachuu ykn barbaaduu hujii hingodhatin ykn kabajaa argachuuf hincinqamin.
12. Ganama hunda dura hirribaa ka’uu aadeffadhu. Culullee ganamaan kaatetu ija fuudha.
13. Gatii ufiif kenni; yeroodhuma namoonni akka nama bu’aa hinqabneetti silaakkayanis.
14. Waa’ee namootaa osoo hintaane yaadota gurguddoo irraa haasayuu heddummeessi.
15. Maallaqa kee hanga saantimootaatti too’achuuf yaali.
16. Karoora baafatte galmaan gayuu irratti cichi; hangamuu dadhabsiisaafi obsa fixachiisaa yoo ta’e.
17. Waa xiqqoos taatu, yeroo injifannoon ykn milkiin argamte itti gammadi.
18. Gara jalqabaatti faaydaa argattu irra waan faaydaa argamsiisu irratti maallqa, yeroofi beekkumsa kee dhangalaasi.
19. Jijjiiramaaf saahuu ufqopheessi.
20. Maallaqni waa hunda dursuu akka hinqabne quba qabaadhu.
21. Yeroo tokko tokko waan keessi kee sitti himus dhagayi.
22. Bakka heddutti ufhinciccirin. Kallattii dandeettiifi fedhii itti qabdu irratti fuulleffadhu.
23. Yaanni kee inni jlaqabaa tarii isa hunda caalu ta’uu dhabuu akka malu qalbisi. Isa caalu barbaaduu hujii kee keessaa tokko taasisi.
24. Hariiroofi jireenya hawaasummaa hanga tokko woreegi. Hoy hoyiin gammachuu yeroo malee milkii isa waaree hinargamsiisu.
Maddi, waan dubbisnerraa!
← N A G A A S H I N D A G A N N E !
JECHOOTA DHAMA QABAN ILMA NAMAAF FURTUU JIRENYAA →